Trafikana sokatra 72 naverina avy any Kaomoro
Araka ny fampitam-baovao ofisilian’ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra :
“Tonga soamantsara teo amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ireo sokatra Astrochelys radiate miisa 72 nisy nanondrana an-tsokosoko tao amin’ny Nosy Kaomoro, ny volana novambra lasa teo.” Mahagaga fa tsy nivoaka ny anaran’ny mpanondrana. Azo antoka aloha fa tsy nisy entana niainga teto amin’ny Nosy raha tsy nisy nitondra. Tsy sokadranomasina ihany koa ireto biby arovana ireto ka nilomano no nahatongavany tany.
Vaolaza fa efa misokatra ny fanadihadiana hahafantarana ny tompon’antoka. Saingy teto Madagasikara, misokatra lalan-dava ny fanadihadiana raha tsy olona amoronana “dossier” na mpanohitra ara-politika no tompon’ny ketrika toy izao. Manamaloka tanteraka ny sarin’ny fitondrana izay mijoro araka izany ny raharaha raha tsy hita izay tena tompon’antoka. Tambazotran-jiolahy ambony latabatra efa matianina amin’ny fanondranana no mahavita izao. Etsy andaniny anefa, matoa tratra toy izao ny trafika dia ny firenena any ivelany no mahatratra.
Teto izao, ny polisy tao Kaomoro no nahasarona azy ireo iray voala lasa mahery kely izay. Matoa tratra toy izao eto an-toerana dia ilay mpifaninana ara-barotra no mandaza. Tsy hisy fampandrosoana vanona eto Madagasikara raha an-tsokosoko toy izao no fitavanana toy ny tantely afa-drakotra ny harem-pirenena.